I-Tudors - I-Tudor Dynasty yaseNgilani
I-Tudors yinto eyaziwa kakhulu yindwendwe yaseburhulumenteni yesiNgesi, igama labo elisekho phambili kwimbali yeYurophu sibonga kwiifilimu kunye nomabonwakude. Ngokuqinisekileyo, i-Tudors ayinakuyifaka kwi-media ngaphandle kokubamba ingqalelo abantu, kunye no-Tudors-uHenry VII, unyana wakhe uHenry VIII kunye nabantwana bakhe abathathu u-Edward VI, uMary no-Elizabeth, kuphela olwaphulwa ngumthetho wesithoba. I-Lady Jane Grey-iqulethe ezimbini ezikumkani ezidumileyo eNgilani, kunye nezona zintathu zithandwa kakhulu, nganye zinomdla obumnandi, ngamanye amaxesha.
I-Tudors nayo ibaluleke kakhulu kwizenzo zabo ngokubanzi njengama-reputations abo. Babusa iNgilani ngeli xesha xa iYurophu yaseNtshona ihamba ukusuka kwixesha eliphakathi ukuya kwixesha langoku, kwaye yaqalisa ukutshintshwa kolawulo lukaRhulumente, ubudlelwane phakathi komqhele nabantu, umfanekiso wobukhosi kunye nendlela abantu abanqula ngayo. Baye bajongana nokubhala kwegolide yesiNgesi nokuhlola. Bamele bobabini beminyaka yegolide (igama elisasetyenziswa njengemifanekiso yamuva nje ngoElizabethe I bonise) kunye nexesha lokungcola, enye yeentsapho ezihlukana kakhulu eYurophu.
Imbali ye-Tudors inokulandelwa emva kwexesha leshumi elinesithathu, kodwa ukuphakama kwabo ekugqibeleni kwaqala ngomhla weshumi elinesihlanu. UOwen Tudor, umninimzi waseWelsh, walwa kwimikhosi kaKumkani Henry V yaseNgilani. Xa uHenry efa, uOwen watshata nomhlolokazi, uCatherine waseValois, waza walwa nenkonzweni yonyana wakhe, uHenry VI.
Ngeli xesha, iNgilani yahlukana ngumzabalazo wetrone yesiNgesi phakathi kweentlanga ezimbini, iLancastrian neYork, ebizwa ngokuba yiMfazwe yamaRos. UOwen wayengomnye wamaLancastrians kaHenry VI; emva kokulwa kweMortimer Cross, iYorkist, uOwen wabulawa.
U-Owen, unyana ka-Owen, u-Edmund, wavuzwa ngenxa yenkonzo yakhe yentsapho ngokuvuswa ku-Earl waseRichmond nguHenry VI.
U-Edmund watshata noMargaret Beaufort, umzukulu kaJohn waseGaunt, unyana kaKumkani u-III. Umntwana kuphela uEdmmund uHenry Tudor wayekhokelela ekuvukeleni uKumkani uRichard III waza wamhlula e-Bosworth Field, ethatha itrone ngokwakhe njengomzukulu ka Edward III. UHenry, ngoku nguHenry VII, watshata umlindlalifa kwiNdlu yaseYork, ngokugqibeleleyo ukuphelisa iMpi yeeRes . Kuza kubakho abanye abavukeli, kodwa uHenry wahlala ekhuselekile.
Emva kokutshatyalaliswa kukaRichard III kwi- Battle of Bosworth Field , wafumana imvume yephalamende waza watshata ilungu lomntakwabo, uHenry waba yinkosi. Wathatha inxaxheba kwiingxoxo zezopolitiko ukukhusela isikhundla sakhe, ukwenza izivumelwano ekhaya nakwamanye amazwe, ngaphambi kokuqalisa ukulungiswa koorhulumente, ukwandisa ulawulo lolawulo lwaseburhulumenteni nokuphucula imali yebukhosi. Ekufeni kwakhe, washiya ubukumkani obuzinzile kunye nobukumkani obutyebi. Wayelwela ngamandla kwezopolitiko ukuze azenzele yena kunye nosapho lwakhe ngokuchasene nokuzalela iNgilani emva kwakhe. Kufuneka ahambe phantsi njengempumelelo enkulu kodwa enye ingqongwe yonyana wakhe nabazukulwana bakhe.
Inkosi eyaziwayo kakhulu yesiNgesi yonke, uHenry VIII uyaziwa kakhulu ngabafazi bakhe abathandathu, umphumo wecala lokukhupha ukuvelisa iindlalifa zezilwanyana eziphilileyo ukuba zithwale ikosi yaseTudor phambili.
Esinye isiphumo salesi sidingo kwakuyiNguqulelo yesiNgesi, njengoko uHenry ahlukanisa iSonto leNgesi kude noPapa noKatolika ukuze ahlukane. Ulawulo lukaHenry lwabona ukuvela kweRoyal Navy njengamandla amakhulu, utshintsho kuorhulumente obophe umlawuli wongameli kwipalamente, kwaye mhlawumbi umxhasi wolawulo lwakhe eNgilani. Waphumelela ngunyana wakhe ophela, u-Edward VI. Abafazi bawubamba iintloko, ngokukodwa njengabini baphunyezwa kwaye ukukhula kwenkolo kwahlula iNgilani kangangeminyaka engama-70, ekhokelela kumbuzo ongenakuvunyelwana ngawo: nguHenry VIII umtyholi, inkokeli enkulu okanye ngandlela-thile?
Indodana uHenry VI ayeyifunayo, uEdward wayifumana itrone njengenkwenkwana waza wafa emva kweminyaka emithandathu kuphela, ukubusa kwakhe kwalawulwa ngamansela amabini alawulayo, u-Edward Seymour, kunye noJohn Dudley.
Baqhubeka nokuguqulwa kwamaProtestanti, kodwa u-Edward othembekileyo okholo lwamaProthestani uye wabangela ukucinga ukuba wayeza kuthwala izinto xa wayephila. Nguye owaziwayo kwimbali yesiNgesi yaye unokutshintsha ikusasa lohlanga ngendlela ephawulekayo, enjalo ngexesha.
UMary Jane Grey ngumntu ombi kakhulu wexesha leTudor. Ngombulelo kumacandelo kaJohn Dudley, u-Edward VI wayephumelele ekuqaleni ngu-Lady Jane Gray, umzukulwana oneminyaka elishumi elinesihlanu ubudala ka-Henry VII kunye nomProthestani ozinikeleyo. Nangona kunjalo, uMary, nakuba yayingumKatolika, wayenenkxaso enkulu kakhulu, kunye nabalandeli bakaMary Jane batshintsha ngokunyanisekileyo ukunyaniseka kwabo. Wabulawa ngo-1554, emva kokuba enze okuncinci ngaphezu kokuba asetyenziswe ngabanye njengesihloko somfanekiso.
UMariya wayeyinkosikazi yokuqala yokulawula iNgilani ngokwakhe. I-pawn yezinto ezinokubambisana nomtshato ebusheni bakhe, nangona kungabikho nantoni eyenzekayo, naye wachazwa ngokungekho mthethweni xa uyise, uHenry VIII, waqhawula umtshato wakhe uCatherine, waza wabuyela emva koko emva koko. Xa ethatha itrone, uMariya wathatha umtshato ongathandekiyo kuFilipu II waseSpain waphindela eNgilani waya kwiKatolika. Amanyathelo akhe ekubuyiseni imithetho yehlazo kunye nokwenza amaProtestanti angamakhulu amathathu amfumene igama lomnxeba uMary Mary. Kodwa ubomi bukaMariya akuyona nje indaba yokubulala unqulo. Wayenqwenela ukuba uyindlalifa, okubangelwa ukukhulelwa okungamanga kodwa kakhulu kakhulu, kwaye njengowesifazane olwa ukulawula uhlanga, waphula izithintelo uElizabhete kamva wahamba ngazo.
Iimbali-mlando zivavanya uMariya ngokukhanya okutsha.
Intombi ka-Henry VIII encinci, uElizabhete wasinda esilungelweni esasongela uMariya, kwaye oko kwakubonisa ukuba wayengumngqineli kumntwana omncinci, ukuba abe nguKumkani waseNgilani xa wayenokubulawa. Enye yeentlanga ezihlonishwa kakhulu kwisizwe, u-Elizabethe wabuyela kweli lizwe waya kwiProtestanti, walwa nemfazwe yaseSpain kunye ne-Spain ukukhusela i-England kunye nezinye iintlanga zamaProthestani, kwaye wahlakulela umfanekiso onamandla njengomfazi oyintombi oyintombi ebudlelane naye . Uhlala egxininiswe kwiimbali-zembali, iimvakalelo zakhe zokwenene kunye neengcamango ezifihliweyo. Udumo lwakhe njengombusi omkhulu ulungelelaniso, njengoko ethembele kakhulu kuninzi ekudeni kunye nobunzima bakhe obuyibuqu ekwenzeni izigqibo ngaphezu kwesigwebo se-canny.
Ukuphela kweTudor Dynasty
Akukho namnye wabantwana bakaHenry VIII ababenayo nayiphi na inzala yabo, kwaye xa uElizabeth Ifa, wayengowokugqibela wamakhosi aseTudor; wa landelwa nguJacob Stuart waseScotland, owokuqala kwindlu yobukhosi yaseStuart kunye nonyana ka-Henry VIII udadewabo omdala, uMargaret. I-Tudors yadlulela kwimbali. Nangona kunjalo baye banandipha ubomi obuninzi emva kokufa, kwaye bahlala phakathi kweentlanga ezidumileyo kwihlabathi.
Eyona ndawo ephezulu kunazo zonke kunye neeSUV
Ziziphi izakhono endiyidingayo ukuze ndibe nguprofer olungileyo?